[solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ????
Myanmar IT Resource Forum » TEMPORARY PLACE » » Unknown Discussions » [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ????
1 [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ???? on 28th January 2011, 2:12 am
ကျွန်တော်တခုလောက်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ် .. သိပြီးသား ဆွေးနွေးပြီးသားဆိုရင် .. ဒီtopic ကို Del: ကျွေးလိုက်ပါ ..
ကျွန်တော်သိချင်တာ က IDM ကဘာလို့ သူ့ဘာသာ Download လုပ်နေတာလဲ ဆိုတာပါ .. ဘာကိုပြောချင်တာလဲ ဆိုတော့ ... ဥပမာ .. ညီကိုတို့ IDM နဲ့ Down ဖို့ လုပ်နေဆဲ (file ထားမယ့် location တွေဘာတွေပြီးတဲ့အခြေနေ ) ... Download ဖို့ ready ဖြစ်နေဆဲ အခြေအနေမှာ .. *** START Download **** မနှိပ်ပဲ .. အချိန်တခုလောက် စောင့်ကြည့်ပါလား ???? စောင့်ပြီးလို့ .. ညီကိုတို့ စdown တဲ့ အချိန်မှာ .. File size နဲ့ Download speed ကိုမူတည်ပြီး .. File ရဲ့ တချို့တဝက်က Down ပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ... File size နည်းခဲ့ ရင် . စdown တာနဲ့ Finish ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ....
ကျွန်တော် သိချင်တာ အဲဒါပါပဲ ..ကျွန်တော်အတွက် အမြဲတမ်းအဆင်ပြေနေပေမယ့် ... မသိသလိုသိသလို ဖြစ်နေပြီး တော့ လုပ်နေရတာ ..စိတ်ထဲမှာ အဆင်မပြေဘူး ..မေးချင်တာနှစ်နဲ့ချီနေပြီ .. ရှာလို့မတွေ့တော့မှ ခုလိုမေးကြည့်တာပါ.. သိပြီးသားဆိုရင်လဲ ပြောပြပေးပါ ..မသိသေးရင်လဲ ... စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ ...ပျော်စရာကောင်းပါတယ်..Cafe` မှာ Down တဲ့အခါ သူများလဲ connection မထိခိုက်တော့ဘူးပေါ့ ....
****အမှားပါခဲ့ရင် ဝေဖန်နိုင်ပါတယ် ....
2 Re: [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ???? on 9th April 2011, 3:45 pm
အဲ့ဒါဟုတ်တယ် ကျွန်တော်လဲသတိထားမိတယ်.......ဘာလို့လဲတော့မသ်ိဘူး.... confirm မလုပ်ပဲခဏစောင့်လိုက်ရင်
start download ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ချိို့တစ်ဝက်က ဒေါင်းပြီးသားဖြစ်နေတယ်.......ဒါပေမယ့်IDM ကိုလိုင်းမကောင်းရင် သုံးရတာအဆင်မပြေဘူး... ဒေါင်းလုပ်ဆွဲလိုက်ရင် စက်က browserဟမ်းသွားရော... တော်တော်
ကြာတယ် .....ကျွန်တော်ကတော့လိုင်းမကောင်းရင် IDMကိုဖြုတ်ထားတယ်.....အဲ့ဒါမှဒေါင်းရတာအဆင်ပြေတယ်..
3 Re: [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ???? on 9th April 2011, 4:37 pm
ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ သုံးချင်လို့ကိုမသုံးရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ IDM ကို Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ fake serial number has been block ဆိုပြီးပြီးသွားရော။ ကဲဘယ်လိုဆက်လုပ်ရပါ့မလဲ။ Patch တောင်ဖြည်တဲ့အဆင့်မရောက်ပါဗျာ။
4 Re: [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ???? on 9th April 2011, 7:05 pm
download speed က idm နဲ့ယှဉ်လို့ရပါတယ်
video တွေဒေါင်းဖို့ဆိုရင် download helperလေးပါ တွဲသွင်းလိုက်ပါ
လုံးဝ ok ပဲ..
ဘာ error မှတက်စရာမရှိဘူး
အကုန်လုံးက free ဖြစ်တဲ့အပြင်... firefox4မှာလည်း compatible ဖြစ်ပါတယ်
တစ်ခုပဲ အင်တာနက်ဆိုင်မှာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ portable မဖြစ်ဘူးပြောရမယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက add-on လေ software မှာမဟုတ်တာ
Last edited by Fox on 3rd August 2011, 10:52 pm; edited 1 time in total
5 Re: [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ???? on 9th April 2011, 7:41 pm
Orbit Downloader လေးလဲမဆိုးဘူးဗျ။ သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်လင့်ခ်ကို gmail ကနေ ပို ့ပေးပါမယ်။ သူကလဲfree ပေးတာပဲ။
6 Re: [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ???? on 10th April 2011, 12:20 pm
ဒေါင်းလုပ်ဒါတွေက တော်တော်တော့ပေါတယ်ဗျ။ ကိုဆက်မော်က အဲ့patch ဖိုင်တွေ keygenတွေဖွင့်ရင် atnivirus ကို ခဏပိတ်ထားဖို့လိုမယ်။ antivirus ကအဲ့ဒါတွေကို virusဆိုပြီး ဖမ်းတတ်တယ်။
7 Re: [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ???? on 10th April 2011, 1:48 pm
ကျွန်တော်ထင်တာတော့ patck နဲ့keygen မသွင်းခင် IDM ကိုမပိတ်မိလို့လို ့ထင်ပါတယ်
နောက်ပြီး ကွန် ကိုလဲခနလောက်ပိတ်ပေးထားပြီးသွင်းရင် အဆင်ပြေမယ်လို ့ထင်ပါတယ်။
8 Re: [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ???? on 11th April 2011, 8:53 am
ညီကို အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် Downthemall ကို စမး်သုံးလိုက်အုန်းမယ်။ ကျေးဇူးပါ။ ။ အကိုမပို့ပေးနဲ့တော့ Orbit Downloader ဆွဲသုံးကြည့်လိုက်မယ် / Thank U ///အလကားရလို့ကတော့ အကုန်ဆွဲပစ်မယ်ဗျာ
9 Re: [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ???? on 13th April 2011, 6:05 am
ဆက်မော် wrote: ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ သုံးချင်လို့ကိုမသုံးရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျ။ IDM ကို Install လုပ်ပြီးတာနဲ့ fake serial number has been block ဆိုပြီးပြီးသွားရော။ ကဲဘယ်လိုဆက်လုပ်ရပါ့မလဲ။ Patch တောင်ဖြည်တဲ့အဆင့်မရောက်ပါဗျာ။
x-zip wrote: ကျွန်တော်သိချင်တာ က IDM ကဘာလို့ သူ့ဘာသာ Download လုပ်နေတာလဲ ဆိုတာပါ .
Downloads Menu -> Option Submenu -> Downloads tab က Start downloading immediately while displaying "Download File Info" dialog checkbox ကိုရွေးထားလို့ပါ။
IDM နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိပေးလိုတာကတော့ [You must be registered and logged in to see this link.] လို site ကဖိုင်တွေ download လုပ်မယ်ဆိုရင် Downloads Menu -> Option Submenu -> General tab ရဲ့ Capture downloads from the following browsers အောက်က Mozilla နဲ့ Mozilla firefox checkbox တွေကို uncheck လုပ်ပေးထားရပါမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီ site တွေက IDM နဲ့ download လုပ်တာကို ပိတ်ပင်ထားလို့ပါ။
10 Re: [solved]IDM ဘာကြောင့် သူ့ဘာသာ download ဆွဲတာလဲ ????